Paths of Light Dvd Bhokisi - Dhizaini magazini
Dvd Bhokisi Nzira yakanakisa yekubata pfupi pfupi pimoto nzira dzeChiedza naZina Caramelo yaive yekuve nechokwadi chekuti DVD raive nekanaka nyaya yekufanana. Iko kurongedza chaiko kunoratidzika kunge kwakadzurwa kubva mudondo ndokuumbwa kuti iite CD. Kunze, mitsetse dzakasiyana siyana inoonekwa, ingangoita kunge miti midiki iri kukura padivi rekombi. Iyo yekumapuranga kunze inobatsira zvakare kuipa iyo inonyanya kuve yakasaridzika chitarisiko. Nzira dzeChiedza ndeyekunyanyisa kuwedzerwa kubva kumatare akawonekwa nemaCD mazhinji muma1990, ayo aowanzove nemapurasitiki ekutanga aine pepa rekutsanangudza zviri mukati. (Zvinyorwa naJD Munro)
Zita rechirongwa : Paths of Light , Vagadziri zita : Francisco Elias & Nelson Fernandes, Izita remutengi : Francisco Elias & Nelson Fernandes.
Dvd Bhokisi Francisco Elias & Nelson Fernandes Paths of Light